ny fitsangatsanganana amin’ny andro fety – Malag@sy Miray
ny fitsangatsanganana amin’ny andro fety
Rehefa manakaiky ohatra izao ny fetin’ny Paska dia maro ireo dokam-barotra miantso ny mponin’Antananarivo sy ny manodidina ho atsy na ho ary. Anisan’ny fialamboly mampiray ireo mpinamana na ny mpianakavy ny fiarahana mitsangantsangana. Na andro alahady io na andro fialan-tsasatra hafa.Raha ho an’ny avy eto an-drenivohitra dia toerana vitsivitsy no efa fantatra fa misy hetsika sy fialam-boly matetika :
Antsirabe : raha ny tanànan’Antsirabe dia fantatra tamin’ny fiarahany miasa amin’ny orinasa lehibe iray izay nikarakara ny fetin’ny labiera tany. Misy ireo mpikarakara fety manaraka izany fety lehibe izany dia manararaotra mikarakara fialam-boly hafa toy ny alim-pandihizana na fifaninanana isan-karazany. Anisany mahafinaritra ny mpitsidika any ny farihin’Andraikiba, ny fitaingenana soavaly manoloana ny gara na ny filomana ao an-dranomafana raha tsy ilaza afa-tsy ireo isika.
Ampefy : Misy ihany koa ny mandeha any am-pefy ka taty aoriana dia nisy mihitsy ireo haino aman-jery nanararaotra izany mba hikarakarana hetsika hamalifaliana ny mpitsangatsangana any. Anisan’ny toerana mahafinaritra ireo mpitsidika any ny mankany amin’ny « Chute de Lilly » na mijery ny « Jeyser » na mitady ny trondro mampalaza an’ny faritr’Itasy.
Ivato sy ny manodidina : Ny faritry ny seranam-piara-manidina moa izany dia fantatra amin’ireo toby miaramila misy amnodidina azy. Matetika ireo toby ireo dia mikarakara fety na mandray fampisehoana. Toy izany koa ny kianjan’i Don Bosco izay toerana malalaka ahafahana mijery fampisehoana no mitsangatsangana.
By-Pass sy Marais Massay : misy moa ireo nisafidy ny tsy handeha lavitra dia amin’ireto lalam-baovao roa ireto no mandeha ka tsy dia mankeny Ambatofotsy firy intsony.
Ny faritra Atsinanana :Toamasina sy ny manodidina ihany koa dia toerana ankafizin’ny mponina Antananarivo izay manararaotra ny alatsinainy fanampiny mba ialana amin’ny hazakazaka misy eto an-drenivohitra. Manomboka ao Ambila Lemaitso, mitohy ao amin’ny farihin-dRasoabe ao Manambato, mandalo ao an-drenivohitry ny Betsimisaraka ary manohy mianavaratra atsinanana mihazo an’i Foulpointe, Mahambo, Fenoarivoatsinana ary Sainte Marie.
Ny faritra avaratra andrefana : Vitsivitsy ihany ireo mihazo ny faritr’i Boina satria na dia tsara aza ny lalana dia lavitra ihany. Misy ihany anefa ireo afaka manainga mialoha na mody taratara ka tsy dia maninona na lavitra aza ny lalana raha toa ka mandeha fiara. Misy moa ireo tena manan-katao ka afaka mihazo ireo faritra rehetra tiany amin’ny alalan’ny fiara manidina.
Misy ihany koa ireo tsy mivoaka ny tanàna noho ny tsy fahampian’ny fandriam-pahalemana ka dia aleony mikarakara fiaraha-misakafo tsotsotra ao an-tokantranony, mihirahira sy mihomehy ary miara-mijery horonan-tsary na fandaharana mampiala voly rehefa reradreraka.Raha ny faniriako aloha dia ny mamonjy rivotra madio any ambany vohitra, lavitra tabataba, lavitra korontana ka tsy mahita afa-tsy ireo havoana mitandahatra sy renirano mikoriana malefaka. Indrisy fa ny ala rehetra teny ambanivohitra dia efa lasa kitay na arina saribao na koa lasa fanaka na varavarana sy varavarankely ka indraindray efa tadiavina mafy vao mahita alokaloka itsorana.Ka amin’izay fotaona izay no hihirako ito hira nentin-drazana : « Aiza ho aiza an’iry bongo iry ny làlana mankany aminay? Malahelo an’i dada aho hoe, malahelo an’i neny aho hoe, mila tsy ho tantiko intsony ny harivahariva an-tanin’olona, indrisy mantsy izany, indrisy fa mampitomany… » Arahina valiha sy angorodao izany hira izany an, aoka fotsiny. Tsy te ho any lavitra any ny tena fandrao ngaoma 🙂
Les grands esprits se rencontrent, merci l’Hebdo de Madagascar.